:: My Little World ::: I've got
Posted by Nay Nay Naing at 9/11/2008 05:02:00 PM
rEx xEnon said...
Hey sis, I think one month 50 GB free is wrong. :P
* iFlexi Value
- 1GB free for one month
* iFlexi Plus
- 2GB free for one month
* iFlexi Premium
- 3GB free for one month
Could you pls tell me what is your plan? Cos I've also got! :D
Friday, September 12, 2008 12:20:00 AM
Bro rEx xEnon >>
Singtel က Apple Plans တွေ ဖြစ်တဲ့ iFlexi နဲ့စတဲ့ Plan တွေယူရင် Free Local Data 1GB/ 2GB/ 3GB ရတာ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မက အဲဒီ Plan တွေယူတာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန် SingTel Plan တွေထဲက iTwo Value Plan ယူလိုက်တာ။
ပြီးတော့မှ ဖုန်းမှာ အင်တာနက်သုံးလို့ ရအောင် Broadbad on Mobile Plan ကို တွဲယူလိုက်တာ။ Broadband on mobile plan တွေမှာ တစ်လကို FreeLocal Bandle Usage 50GB ရတဲ့ Plan တွေရှိတယ်လေ..
Singtel iPhone - http://home.singtel.com/iphone/
Singtel Broadband on Mobile - http://home.singtel.com/bbmobile/
Buy online iphone - https://www.singtelshop.com/iphone/
တွေမှာ သွားကြည့်လို့ ရတယ်။ Brother က လက်ရှိ Singtel သုံးနေတာဆို အဲဒီမှာ Recontract ဆိုတာပါတယ်။ ပြီးတော့ iFlexi plan မယူပဲ SingTel Plan ထဲက တစ်ခုခု ယူပြီး Broadband on mobile ထည့်မယ်ဆို Value Added Service မှာ ထည့်ကြည့်လို့ ရတယ်။ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ သိရတာပေါ့။
အစ်မ ယူတဲ့ line က ဈေးသက်သာတယ်။ အသိတစ်ယောက် ၀ယ်ပေးတာ။ ပုံမှန်ဈေးထက် သက်သာတယ်။ ဒါကြောင့် ယူဖြစ်သွားတာ။ ထပ်သိချင်တာရှိသေးတယ် ဆိုရင် ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်လည်း သိနေတာပဲ။
Thanks for your reply! I'll go & check at SingTel shop later...
Monday, September 15, 2008 11:37:00 AM
any web to download3rd party progrm for i phone? if u know, please share.....
Sunday, September 21, 2008 2:52:00 PM